funny | My Burmese Blog
Posts Tagged: funny	Damn You Auto Correct
On August 13, 2011	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- funny	Smart phone တှမှော နောကျပိုငျး text auto correction တှေ အကုနျလုံးနီးပါးပါလာတာတှေ့ ရပါတယျ။ အဲဒီထဲမှာ မှ auto correction ကပေးတဲ့ တလှဲ စာသားတှနေဲ့ ပေါကျကရတှေ SMS တှေ ဖွဈတတျတာတှေ တှပွေီ့း အရီမရပျနိုငျ လို့ ဘလော့ဂျမှာ ပွနျရှဲပါတယျ။ iPhone မှာပါတဲ့ auto correction က နပွေငျတတျတာတှပေါ။ funny	Continue Reading
Glennz Tees Concepts for 2011
DJ OZMA ~ DRINKIN’BOYS
On April 1, 2011	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- funny	ဂပြနျ​နိုငျငံ​က DJ Ozma ရဲ့ Drinking’s Boys သီခငျြး​ကို ဘ​လော့ဂျ​မှာ ပွနျ​တငျ​လိုကျ​ပါ​တယျ။ ဒီ​သီခငျြး​က ကို​ထူး​မွငျ့​နောငျ အီး​မေးလျ​ပို့​တဲ့ ထဲ​မှာ တှေ့​လို့ ကွညျ့​မိ​ရငျး ကွိုကျ​သှား​တာ​ပါ။ ကွိုကျ​ဆို ကွညျ့​နေ​ရငျး အူ​နှိပျ​နေ​အောငျ ရီ​ရ​ပါ​တယျ။ တကယျ​ပွော​တာ​ပါ မ​ရီ​ရ​ရငျ ကွိုကျ​သ​လို​ပွော။ တျောတျော​လဲ​ပွောငျ​နိုငျ​တဲ့ ကောငျ​တှေ​ပါ​ပဲ။ ငယျ⁠ငယျ​တုနျး​က ၇​တနျး​ကြောငျးသား​ဘဝ​က ဝမျး​ကှဲ​အကို နိုငျငံ​ခွား​က ယူလာ​တဲ့ Blink 182 ရဲ့ What’s My Age Again အတိုငျး​ပဲ အူ​နှိပျ​နေ​အောငျ ရီ​ရ​တယျ။ တဈ​ခု​တော့ ရှိ​တယျ ကလေး​တှေ ရှိ​ရငျ​မ​ကွညျ့ပါ​နဲ့ 18+ ပါ။
iWear ~ Think different, Dress Alike
On December 31, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- funny	iWear ဆိုတာ Apple ကနေ အသစ်ထုတ်မယ့် product line up အသစ်ပါ။ အဲဒီမှာ iJean နဲ့ iglasses တွေပါပါမယ်။ Apple PR က အဆိုအရ “Since Steve controls so much of our lives anyway, it just makes sense to let him dress us too.” လို့ပြောပါတယ်။ 100% Cotton တွေနဲ့ လုပ်ထားတယ်လို့ wikileaks ကနေ သတင်းပေါက်ကြား ထားတယ်။ funny	Continue Reading
Hitler Not Happy About YouTube Policy
On April 27, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- Video	Hitler not happy about the 550d… from oliver walker on Vimeo.
Hitler Downfall ဆိုတာက YouTube မှာ အရင်က နာမည်ကြီး video clip တွေပါပဲ။ အမှန်က အဲဒီ video က အများကြီးရှိတယ် iPad လဲရှိတယ် Camera လဲရှိတယ် iPhone လဲရှိတယ်။ မူရင်း “The Downfall: Hitler and the End of the Third Reich” ဂျာမန် စကားပြော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက ဇာတ်ဝင်ခန်းကို ဖြတ်ထုတ်ပြီး အောက်က စာသားမှာ ပေါက်ကရ ဟာသတွေ english လိုရေးပြီးတင်ကြတာပါ။ အရင် iPad ထွက်တုန်းကလဲ Hitler iPad မှာ camera မပါတာ ipod touch အကြီးစားကြီးဆိုပြီး ပေါက်ကရ စာသားတွေထိုးပြီး တင်ကြတယ်။ ရုပ်တည်ကြီးတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်နေတာကို အောက်က ဟာသတွေလျောက် ဘာသာ ပြန်ထားတာ တကယ်ရီရတယ်။
On April 3, 2010	by Htoo Tay Zar	With	2 Comments	- funny, Personal	မနေ့က April 1 ရက်နေ့မှာ တနေကုန်ပဲ မဟုတ်တာတွေရေး သူများလိုက်နောက် facebook မှာ ရေးလိုက် twitter မှာ ရေးလိုက်နဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ.. အမှန်တော့2ရက်နေ့က Good Friday ရုံးပိတ်ရက်လဲ ဖြစ်နေတာကြောင့် အတော် အူမြူးနေတာ။ FaceBook ထဲလဲ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့ ညီး သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ မနက်ဖြန် ရုံးမတက်တော့ဘူး ပြောလို့ပြော၊ လခ ၁ ဆထက်တိုးလို့ သူငယ်ချင်းတွေ မုန့်လိုက်ကျွေးမယ် အကြောင်း ပြောလို့ ပြောနဲ့ April Fool လုပ်နေတာ။ Twitter မှာလဲ Google Tablet ထွက်ပြီ ရေးလိုက် iPad ဝယ်လို့ရပြီ ပြောလိုက်နဲ့ တနေကုန်ပဲ။
Blogging, funny, Personal	Continue Reading
Google Translate for Animals ~ Beta!!
On April 1, 2010	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- funny	Google Translate ကနေပြီးတော့ ဘာသာစကား တစ်ခုကနေ တစ်ခုကို အလိုလျောက် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာ အားလုံး သိကြမှာပါ။ အခုလဲ beta အနေနဲ့ language တစ်ခု အသစ်ထပ်တိုးလိုက်ပါပြီ Google Translate for Animals လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဆိုတာက တိရိစ္ဆာန်တွေ ပြောတဲ့ အသံကို english လို ဘာသာပြန်ပေးနိုင်တာပါ။ နည်းပညာက မိုဘိုင်းဖုန်းကနေ အသံသွင်းယူလိုက်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်အသံကို Google Translate Servers ပေါ်ကို ပို့ပေးပြီး english လို ပြန်ပေးတာပါ။ အပေါ်မှာပုံပြထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အခုအောက်က youtube video မှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
funny	Continue Reading
How much I’ve earned from This Blog?
On April 1, 2010	by Htoo Tay Zar	With	11 Comments	- funny	မနေ့ညက Google Adsense ဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ အမှန်တော့ ဝင်ပြီး အခြေအနေ မကြည့်ဖြစ်တာကြာပါပြီ.. ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အားနေလို့ ကြည့်ဖြစ်လိုက်တာ။ အခုဘလော့ဂ်မှာ စာဖတ်သူတွေ သတိထားမိမှာပါ ပို့စ်တွေအောက်ဘက်မှာ နောက် sidebar မှာ ကြော်ငြာထည့်ထားပါတယ်။ နောက် RSS feed တွေထဲမှာလဲ ပါတယ် အဲဒီ ကြော်ငြာကနေ ရတဲ့ ဝင်ငွေပိုက်ဆံက အပေါ်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်းရနေပါပြီ။ စုထားတာတော့ ကြာပါပြီ blog ရေးကတည်းက ရသမျှ ပါပဲ အရင်ကတောင် ပြောဖူးသေးတယ်လေ $20 ကျော်ရတုန်းက ပေါ့။ funny	Continue Reading